DHAGEYSO Madaxweynaha Hirshabeele oo ku dhawaaqay inay dhameeyeen khilaafkii dowlada dhexe kala dhexeeyay. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Madaxweynaha Hirshabeele oo ku dhawaaqay inay dhameeyeen khilaafkii dowlada dhexe kala dhexeeyay.
Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabelle Maxamed Cabdi Waare oo maanta shir Jiraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa faah faahin ka bixiyay, wada hadalo Dowladda iyo Hirshabelle maalmihii la soo dhaafay ku dhexmaray isla magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Waare waxa uu sheegay in khilaafkii kala dhaxeeyey dowladda Federaalka Soomaaliya kala heshiiyeen waxkastana lagu soo celiyay sidii ay horay u ahaayeen.
Waxa uu sheegay in dowladda Federaalka Soomaaliya uu kala hadlay sidii tabashooyinka ay qabaan maamul goboleedyada kale looga qancin lahaa,isla markaana isaga dhankiisa uu dowladda kala heshiiyey dhamaan khilaafkii kala dhaxeeyey.
Hadalka maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabeele ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli weli Madaxda kale ee dowlad Goboleedyada uu khilaaf kala dhaxeeyo dowladda Fedraalka,isla markaana Xubno ka socda Aqalka sare loogu maamulada kale si xal loo gaaro is fahan waaga jira.
Wuxuu madaxweyne Waare rajo wanaagsan ka muujiyay in dowlada dhexe ee Soomaaliya ay ka mira dhalintoonta waxyaabihii ay ka wada hadleen oo uu sheegay in niyad wanaag badan ay ka arkeen masuuliyiinta dowlada.
Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa markii uu ka soo laabtay shirkii Magalada Kismaayo ay ku yeesheen hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya waxa uu sheegay in Magalada Muqdisho amnigeeda uu faraha ka baxay,isla markaana Xildhibaanada dowlada federaalka looga baahan yahay inay is ilaaliyaan,waxaana tabashadiisa ugu badneyd arimo la xiriira dhinaca amniga caasimada Muqdisho.
← DHAGEYSO Barnaamijka hoggaanka star, arrimaha Kenya 19-09-2018
DHAGEYSO Barnaamijka Madasha, Qisooyinka 19-09-2018 →